WOWOW Single Handle Kitchen Faucet with Pull Down Spray Brushed nickel
Home / Faucets kichin / Wetuo mmiri / WOWOW Single Handle Kitchen Faucet with Pull Down Spray Brushed nickel
Igwe nke kichin a zuru oke maka ngwa azụmahịa na ụlọ.
Igwe mmiri kichin ndị a dị mma na-agbada nwere ọkwa dị elu nke ịrịọ mma.
Bulite taped nwere ike inye ma nchedo ya na ịchọ ya mma.
Ntuziaka nwụnye 2310700C
Ihe igwekota igwe eji esi nri na chrome 2310700C
Mgbata igwekota na kichin na-agwakọta mmiri ọkụ na mmiri oyi. You nwere ike ịgwakọta mmiri mmiri abụọ ahụ dabaa na mkpa gị. Iji nye gị mmiri ọkụ ịchọrọ ị chọrọ. Inggwakọta mmiri mmiri agwakọta ya na klọọkụ igwe nri kichin nke WOWOW. Mgbanye ahụ na-arụ ọrụ ya nke ọma ma enwere ike ịchịkwa mmiri ahụ n'ụzọ dị mfe. Ma ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ mmiri mmiri n'onwe ya. Will ga-achọpụta ozugbo na arịa a sitere na ezigbo ihe. Ka ọ na-aga nke ọma, na enweghị nsogbu ọ bụla, ị maara na ntachi obi gị niile dị ogologo.
Nwere ike iji ọrụ mmiri atọ ka ị na-agwakọta mmiri mmiri. Na spout ị nwere ike họrọ ọnọdụ usoro ịgbasa, ọnọdụ ịgba, na ọnọdụ aqua-blade. Ọnọdụ aqua-agụba na-enye ụgbọ mmiri mmiri dị ike, nke na-asacha unyi niile n'ite na ite. Ọnọdụ aqua-agụba bụ usoro pụrụ iche nke ị gaghị ezute n'ọtụtụ taịlị igwekota. Ọnọdụ ịgba ahụ bụ ụzọ dị irè isi saa mmiri efere adịghị mma, yana ọnọdụ ịgbado ọkụ mgbe niile bụ nhọrọ kacha mma iji mmiri kụọ mmiri. Eszọ mmiri niile na-enye ọrụ ịchekwa mmiri iji mezie etu esi etinye mmiri gị. N'ụzọ dị otu a, ị ga - etinye aka nke gị ịchekwa na ụkọ sitere n'okike. Na mgbakwunye, ị ga-achọpụta nke a na ụgwọ mmiri gị, dịka ị nwere ike ịchekwa ihe ruru 50% na mmiri ị withụ mmiri na kichin igwekota igwe nri nke WOWOW.
Ihe igwekota igwe eji esi nri nke di elu chrome
WOWOW raara nye enye ndi ahia ya akwa mmiri di elu. Ọ bụ ya mere WOWOW ji ihe ndị karịrị ụlọ ọrụ nyocha niile, ọbụlagodi nke A-ụdị. Na WOWOW anyị kwenyere na iji mma dị elu ị nwere ike ime mgbanwe dị na ahịa. Ozugbo mmadụ hụtụrụla igwe mmịkọ nke WOWOW, onye ahụ ga-abụ ahịa maka ndụ. Ọ bụ ya mere anyị ji ahụ ebe ndị ahịa anyị na-eto kwa ụbọchị. Ga - ahụ ihe kachasị mma na ngwa anyị mepụtara ọzọ, dịka onye nrụpụta Neoperl yana ịmecha ụzọ mmiri elu elu. Anyị na-ahụ na ị nwere ike iji mmiri taịjị anyị na-arụ ọrụ kachasị elu ogologo oge.
Ọ bụ ya mere na WOWOW anyị anaghị atụ egwu ịnye gị oge 5 akwụkwọ ikike akara na kichin igwekota kichin. Imirikiti ụdị faucet dị naanị na-enye oge ikike 1 afọ. Nke a metụtakwara ọtụtụ A-ụdị. Dị ka igwekota kichin na-ejikarị afọ 5 ruo 10, na WOWOW anyị nwere obi ike ịnye gị oge ikike afọ 5 maka afọ ojuju. Ọ ga-abụ ihe enweghị atụ ma ọ bụrụ na aga-edochi igwe ihe igwekota kichin n'ime afọ 5 mgbe ịwụsịrị ya. Anyị ga-ahụkwa nke ahụ anaghị anabata ya, karịchaa site na ndị ahịa anyị. Gịnị kpatara ị ga - eji merie nsonaazụ nke nke a? Ọ bụ ya mere anyị ga-eji dochie igwekota igwe nri kichin ọ bụrụ na ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma n'ime afọ ise. Enweghị nsogbu ọ bụla!
Wetuo ihe igwekota ihe igwekota ihe
Ọrụ na-ejide anya nke igwe na-agwakọta kichin mgbanye chrome bụ mmịpụta ọ na-ewepụta ihe ọhụrụ. Nwere ike jiri nwayọ kwatuo isi mmiri nke na-agwakọta kichin gị ogologo mmiri ma ọ ga-apụta ogologo mmiri. Site na njiri mmiri a ị nwere ike iru ebe ọ bụla ma ọ bụ gburugburu ebe ị na-asa.
Ejiri eriri silica a na-agbanwe agbanwe na-eme ka mmiri dị n'ime mmiri a, yabụ na-enyere gị aka na ọrụ dị mfe ka ọ na-adọpụta n'enweghị nsogbu. Ma mgbe iji ya, ọ ga-alaghachi azụ na-akpaghị aka n'ihi bọọlụ raki nke etinyere na-adịghị ahụ anya na kichin dọnwụ kichin gị. A na-agbanye mmiri na mmiri dị ka ihe ndị dị elu. N'ụzọ dị otu a, ịnweghị ike ichegbu onwe gị banyere iyi, nrapu ma ọ bụ nrafu. Igwe igwekota igwe eji eme ihe a na klọọkụ igwe ga-adi otutu, otutu oge. Nke ahụ bụ nkwa anyị siri ike inye gị.
Azụ ahịa eji igwekota igwe nri igwe chrome
Maka ịdị mma dị elu anyị na-enye igwe igwekota igwe nri klọọkụ anyị, a na-ejikarị igwekota igwe eji eme ihe ebe a na ebe azụmahịa. N'ime ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ụlọ mmanya kachasị arụ ọrụ nke kichin dị mkpa maka arụmọrụ ya. Ọ bụrụ na igwe na-agwakọta kichin ga-ada, ọ nwere ike bibiri ihe azụmaahịa ahụ. Ya mere, ebe azụmahịa dị ka ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ nwere ike ịdabere naanị na ihe kachasị mma. Maka nke a, na WOWOW anyị na-akwụghachi ụgwọ ịchọpụta na ọtụtụ ụlọ oriri na ọ nụ nụ ụlọ arụ ọrụ etinyere igwe ihe igwekota igwe nri anyị. Nkwenye nke nkwenye di nma.
Lọ ọrụ eji achọ ụlọ na-esi nri igwe chọs
E wezụga ogo na arụmọrụ, maka ma ụlọ ma ụlọ oriri na ọ tapụ tapụ, igwekota igwe nri klọọkụ chrome na-enye ọkwa dị elu nke mkpesa mara mma. N’ebe mbu n’ihi udiri arc ya di elu na-ejiko udiri ya na oru, dika inwere ike banye na ebe a na-ano nri. Ndị na-emepụta WOWOW raara onwe ha nye inye atụmatụ dị mma nke ga-adabara na kichin ọ bụla. Ọ bụ ya mere WOWOW na igwekota igwe nri igwe chrome adịghị ka ọlị dị ka igwe ihe igwe ihe ọ bụla ọzọ. Igwe igwekota igwe eji asa nri kichin dị warara n’elu ma dị obosara na ala. Linedị nkecha nke ụlọ a na-eme kichin mara mma karịa ma na-enye kichin gị ụfọdụ finesse. Ọzọkwa mgbe ị na-atụgharị igwe ihe igwekota, ihe ndozi ahụ agaghị etufu ma ọlị.
Na mkpokọta, igwe nhicha igwe nri kichin nke WOWOW na-enye gị uru kachasị mma maka ego ị nwere ike inweta n'ahịa. N’elu ihe nile, inwere otu udiri kichin nke dikwa nma nke puru iche nke ga-adọta mmasi n’uche gi, ma obu ulo ma obu nke ahia. Ihe igwekota igwe eji esi nri igwe chrome biara na ikike nke afọ 5 na nkwa inyeghachi ego ụbọchị 90. Ọ bụrụ na ekwenyeghị na igwekota igwe nri kichin ekwenti, a ga-ahapụ gị ka ị weghachiiri anyị ya n’enweghị ajụjụ a jụrụ. You ga-enweta nkwụghachi zuru ozugbo. Anyị tụkwasịrị obi na ngwaahịa anyị ma anyị kwenyere na ị ga-ahụ n'anya igwekota igwekota klọọkụ anyị.
Uru nke igwekota kichin enweta ihe chrome na achikota:
· Magburu onwe agwakọta atụmatụ
· Igwe mmiri atọ
· Njirimara ịchekwa mmiri
· Yzọ mara mma na nke mara mma
SKU: 2310700C Categories: Faucets kichin, Wetuo mmiri Tags: Enugwu, Igwe eji esi nri kichin, Mkpụrụ mmiri Swivel
Akwụsịla Site Manufacturer
WOWOW ite filler matte Black